မိုက်ဒ်နီရီယမ် ← ဒမ်စတဒ်တီယမ် → ရွန့်ဂန္နီယမ်
အတည်ငြိမ်ဆုံး ဒမ်စတဒ်တီယမ်၏ အိုင်ဆိုတုပ်များ
↑ ၁.၀ ၁.၁ ၁.၂ ၁.၃ ၁.၄ Hoffman၊ Darleane C.; Lee၊ Diana M.; Pershina၊ Valeria (2006)။ "Transactinides and the future elements"။ in Morss; Edelstein၊ Norman M.; Fuger၊ Jean (eds.)။ The Chemistry of the Actinide and Transactinide Elements (3rd ed.)။ Dordrecht, The Netherlands။ ISBN 978-1-4020-3555-5။